မေးခွန်း(၁) အဖြေ [သဘောမတူပါ] အခြားသူတစ်ဦးဦးက သင့်ကိုအရင် ထိခိုက်နာကျင် အရှက်ရစေမည့် အကြောင်းအရာများ၊ ဓါတ်ပုံများ သို့မဟုတ် ကောလဟာလများ တင်ခြင်း၊ မျှဝေခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းများပြုလုပ်သော်လည်း ပြန်လည်တုန့်ပြန်လက်စားချေသည့်အနေဖြင့် ယင်းကဲ့သို့အပြုအမူများ ပြန်လည်မပြုလုပ်သင့်ပေ။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အခြေအနေကို ပို၍ဆိုးဝါးစေပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက အနိုင်ကျင့်လူလည်ကျသူများအား ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲ ? တွင်ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
မေးခွန်း(၂) အဖြေ [သဘောမတူပါ] သင့်တွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကိုယ်ပိုင်သီးသန့်ထားရှိခွင့်ရှိသည်။ ထိုနည်းလည်းကောင်းပင် အခြားသူများတွင်လည်း ၎င်းတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာများကို သီးသန့်ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အခြားသူများ၏ အကောင့်(account)ထဲဝင်၍ ကြည့်ရှုခြင်း၊ ၎င်းတို့ဖုန်းကိုသုံး၍ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် လျှောက်ရေးခြင်းတို့ မပြုလုပ်ရပေ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို သီးသန့်ထားရှိပါ တွင်ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
မေးခွန်း(၃) အဖြေ [သဘောတူပါသည်] လူမှုရေးကွန်ယက်၏ လူထုစံနှုန်းများကို ဆန့်ကျင်နေသည့် ဓါတ်ပုံ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာအား တိုင်ကြားနိုင်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်တွင် ယင်းစံနှုန်းကိုဆန့်ကျင်မှုများထဲတွင် အနိုင်ကျင့်လူလည်ကျမှုများ၊ ရုပ်ပုံများဖြင့် အကြမ်းဖက်မှု၊ မလိုလားအပ်သော ကြော်ငြာသတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့မှုတို့ ပါဝင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါက ယင်းတင်ထားသောအကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဓါတ်ပုံ အနီးရှိ “report”ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ တိုင်ကြားနိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက သင့်စိတ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့် ဓါတ်ပုံများ/ဖော်ပြချက်များ တွင်ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
မေးခွန်း(၄) အဖြေ [မတူပါ] အင်တာနက်ပေါ်တွင် သိသောသူတစ်ဦးကို အပြင်တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံမည်ဆိုပါက သတိရှိရန်လိုအပ်သည်။ တွေ့ဆုံမည့်နေရာကို လူအများသွားလာလေ့ရှိသောနေရာများကိုသာ ရွေးချယ်ပါ။ (ဥပမာ - ကုန်တိုက်များ၊ ရှော့ပင်းစင်တာများ) သင်ဘယ်ကိုသွားမယ်၊ ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာ သူငယ်ချင်း သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးကို အမြဲပြောသွားပါ။ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးကို သင်နှင့်အတူလိုက်ပါရန် ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်လျှင် ပို၍ ကောင်းသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက အဆိုပါအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းချက်သည် အမှန်တကယ်ဟုတ်ပါသလား ? တွင်ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
မေးခွန်း(၅) အဖြေ [ဟုတ်ပါသည်] သင် အင်တာနက်အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းတွင် သင်ဆုကြေးငွေများ သို့မဟုတ် ဆုပစ္စည်းများ (ဥပမာ- လက်ကိုင်ဖုန်း၊ ရက်တိုစရိတ်ငြိမ်း အပန်းဖြေခရီးစဉ် စသဖြင့်)ပေါက်သည်ဆိုသည့် အီးမေး သို့မဟုတ် စာတိုများ လက်ခံရရှိတတ်ပေမည်။ အဆိုပါသတင်းစကားများသည် လုပ်ကြံဖန်တီး လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်းများသာဖြစ်သည်။ သင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ထားခြင်းမရှိသည့် အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုအတွက် သင်ဆုမဲ သို့မဟုတ် ဆုကြေးငွေပေါက်သည် ဆိုခြင်းမှာ ယုတ္တိမရှိပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆုကြေးငွေပေါက်တယ်လို့ စာများလက်ခံရရှိခြင်း တွင်ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
မေးခွန်း(၆) အဖြေ [မသင့်ပါ] သင်ကိုယ်တိုင်မသိသည့်သူများထံမှ ပေးပို့ထားသည့် E-mail များကို ဖွင့်မကြည့်မိပါစေနှင့်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆုကြေးငွေပေါက်တယ်လို့ စာများလက်ခံရရှိခြင်း တွင်ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
မေးခွန်း(၇) အဖြေ [မသင့်ပါ] မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ သင်၏လျှို့ဝှက်စကားလုံးများကို ဖြန့်ဝေပေးခြင်း မပြုလုပ်သင့်ပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များကို သီးသန့်ထားရှိပါတွင်ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
မေးခွန်း(၈) အဖြေ [တူပါသည်] အင်တာနက်တွင် င်တာနက်တွင်အဖြေ်စီမံချက်များအတွက် သတင်းအချက်အလက် အမြောက်အမြားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ သင်၏ ကျောင်း / တက္ကသိုလ်စီမံချက်အတွက် မူလအရင်းအမြစ်၏အမည်နှင့် အချက်အလက်များကို ကျမ်းကိုးစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးသော အလေ့အကျင့်တ